स्वास्थ्य बीमा कसरी गर्ने, के–के छन् सुविधा ? - Baikalpikkhabar
स्वास्थ्य बीमा कसरी गर्ने, के–के छन् सुविधा ?
बैशाख ४, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७५ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर हालसम्म ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना अर्थात् १२.८४ प्रतिशतमात्रै बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
शनिबार, ०४ बैशाख, २०७८, बिहानको १०:५५ बजे